Phang Nga, xeebta riyood ee Thailand | Wararka Safarka
Safarka Socdaalka | | Tailandia, Safarka Aasiya
Xagaagu wuxuu u dhigmaa xeebta iyo qorraxda sidaa darteed waxay la mid tahay wanaagga fasaxa Aasiya. Maxay kula tahay xeebaha thailand? Janno dhulka ku taal? Aniguba sidoo kale Mid ka mid ah xeebaha thailand waa tan quruxda badan Phang nga. Xeebtaan waxay ku taal waqooyiga jasiiradda Phuket waana qurux badan tahay maxaa yeelay qaababka dhagaxa ayaa ka soo baxa ciidda. Dhagaxyada iyo halkan iyo halkaasba waxaad moodaa inay cirka ka soo dhaceen. Haddii aad lacag heysato waxaad joogi kartaa mid ka mid ah meelaha ugu fiican dalxiis ee Thailand, Khao Lak. Haddii kale, xeebta marwalba waa la heli karaa.
Aaggan jasiiradda Phuket waxaa ku yaal beero badan oo qaran, keymo qurux badan oo kuleyl ah, xeebo ciid dahab ah iyo xeebo ciid cad leh iyo kaabayaal si wanaagsan loogu diyaariyay dalxiiska. Haddii aad jeceshahay dabeecadda, Khao Lak runtii waa wax qurux badan. Sanadkii 2004 tsunami waxyar ayuu ka gudbay huteeladu waa inay dib u dhis ku sameeyaan xarumahooda laakiin maanta taasi waa taariikh waxaana mar kale jira hoteelo, barkado ay ku xardhan yihiin bakhtiyaanasiib iyo beero cagaaran Ugu yaraan ilaa tsunami ee xigta.
Ka sokow nasashada halkan tan xeebta thailand waxaad ku socon kartaa dhabarka maroodiga, waxaad booqan kartaa boholo cajaa'ib leh, socod dheer ku tagi kara, sahaminta macbudyo ama rafting.
Isha iyo sawirka 2: via Goobta 360
Sawirka 1: via Hel Tobanaan Toban
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Safarka Aasiya » Tailandia » Phang Nga, xeeb riyo ah oo ku taal Thailand
Xaaladda Hadda ee Waaxda Hoteelka ee Dunida